एउटा जमाना थियो जति बेला राजाको कुरा काटेर बोल्नेलाई राजद्रोह र देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने गर्थ्यो। त्यो राजतन्त्र गैसक्यो तर देश जहींका तहीं छ। भनेपछि देश भनेको राजा होइन रैछ भन्ने कुरा ढिलो चाडो थाहा भयो।
गणतंत्र जिन्दाबाद भन्दा गगन थापा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कारवाहीमा र हिरासतमा परेकै हुन। अदालतमा उपस्थित गराईएकै हुन। जेल चलान भएकै हुन। त्यो गगन थापाले आज सीके राउतको कुरा नबुझ्नु बड़ो अचम्मको कुरा हो। बोलेको सुनिदैन। पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने डर हो कि?
CK Raut Autobiography (in Nepali)
त्यस्तै भोलिको संघीय नेपालमा रहेका मधेश राज्यहरु सहितको देश पनि देशै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनेले थाहा पाउलान। अहिले काठमाण्डु राजधानी भएको देश मात्र देश भन्ने छ। तर काठमाण्डु जस्ता १० वटा राजधानीहरु खड़ा हुन सक्ने अवस्था छ। तर देश जहीँका तहीं रहन्छ। कतै जाँदैन। देशको माया लाग्नेहरूले सीके राउतलाई गाली पछि गर्ने पहिला टैक्स तिर्न अगाडि सर्नुपर्यो। काठमांडुका वासिन्दाले टैक्स तिर्न शुरू नगरेसम्म शहर सफा हुनेवाला छैन। माया लाग्ने देशलाई सफा पनि राख्ने हो कि?
विशुद्ध संघीयतामा एउटा संघभित्रका राज्यहरुले चाहेमा छुटिएर अलग देश बन्न पाउने अधिकारको कुरा कुनै नौलो र अचम्मको कुरा होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता त संघीयता नै होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता भनेको वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार जस्तो हो। वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार त मानव अधिकार नै होइन।
छुट्टिन पाउने अधिकार भएको संघीयताकालागि पनि प्रचण्ड र बाबुरामले गृह युद्ध थालेका हुन। उनी हरुको त्यो विचारमा कुनै फेरबदल आएको मलाई थाहा छैन। उनीहरूले त्यो विचारकालागि कतै क्षमायाचना गरेको मलाई थाहा छैन। मोरंग लगेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि सिके थुनेको खोरमै थुन्ने बेला आएको हो?
कमसेकम सीकेले बन्दुक त उठाएको छैन।
वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार मानव अधिकार नै नभए जस्तै छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै होइन। देशमा भएका विगतका दुई चुनावमा सुशील कोइराला अध्यक्ष भएको नेपाली कांग्रेस र केपी ओली अध्यक्ष भएको एमाले, औंठा छाप गृह मंत्री वामदेव गौतमको पार्टी एमाले दुवैले संघीयताको पक्षमा नै मत मागेका हुन। थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर, बुझेर अथवा नबुझेर, चाहेर अथवा नचाहेर यी बाहुनहरुले आफूलाई संघीयताको पक्षमा उभ्यायेकै हुन। छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै नभएकोले यी बाहुनहरुले संघीय नेपालका राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएकै हुन।
सीके राउतलाई थुनेको खोरमा सबभन्दा पहिला बाबा वामदेव बाहुनलाई लाने हो कि? कि सुशील र केपीलाई पनि सँगै लाने? छलफल गर्न सकिन्छ।
नेपालमा संघीयताको स्थापना मधेसी क्रांतिले गर्यो। नेपाल संघीय भइसक्यो। त्यो घोषणालाई औपचारिक रूप मात्र दिने हो नया बन्ने संविधानले। त्यो संघीयता भनेकै राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको संघीयता हो। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नया संविधानमा नलेखि सुखः? वाक स्वतन्त्रता नया संविधानमा नलेखि सुखः?
तर त्यो लेख्दैमा देश टुक्रिहाल्ने होईन, टुक्राउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जनमत संग्रह तुरुन्तै भइहाल्ने होइन। त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। शायद हस्ताक्षर संकलनको कुरा होला। मधेशको राज्य स्तरको संसदले केही कदम चाल्नुपर्ने होला। जनमत संग्रहको घोषणा भैहाले पनि चुनावी कैंपेन हुन्छ। भाषणबाजी हुन्छ। अनि त्यस चुनावमा वामदेव कूदे भो, कसैले त्यति बेला उसलाई रोक्दैन। जनताको मन जित्ने हो, चुनाव जित्ने हो।
अहिले त प्रत्येक मधेशवादी दल र नेता मधेशलाई अलग देश बनाउने कुराको विपक्षमा देखिएका छन। वामदेवको देश टुक्रिन नदिने दिव्य इच्छा पुरा गर्न त्यति सारो गार्हो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।
bamdev gautam ck raut Foreigner in Nepal foreigner's eye India Kantipur Krrish Nepal Nepali language Rupee Sushil Koirala